स्वत: डिटेलि Supp आपूर्ति, टचलेस कार वॉश, कार केयर उत्पादहरू - OPS
व्यावसायिक टचलेस कार धुने उत्पादन निर्माता
थोक कार विवरण आपूर्ति, कस्टम कार धुने, हेरचाह उत्पादनहरु।
गुणवत्ता को लागी खोज्दै, सस्ती ओटो डिस्प्ले आपूर्ति?
टचलेस कार वाश उत्पादनहरू
उच्च प्रभाव टचलेस कार वाश पाउडर,
प्रि-वाशिंग र स्पन्ज वाइप गर्न आवश्यक पर्दैन, शक्तिशाली सफाई प्रभाव। पानी, समय र लागत बचत गर्नुहोस्। कार धुने कार्यको समयमा कोरिनबाट जोगिनुहोस्। अटोमोबाइलको चमक बढाउनुहोस्।
धुनुहोस्, पकाउन सक्नुहुन्छ चाँडै गहिरो हटाउनुहोस्। यो धेरै सरल, सुविधाजनक र biodegradable हो। गाढा, चिसो र अन्य घटनालाई ह्याण्डल हब सुधार गर्नुहोस्, यसलाई वास्तविक चमकमा पुन: बहाल गर्नुहोस्! विभिन्न पहिया हब सतहहरूको लागि उपयुक्त।
यो एक सुपर एकाग्रता कार वाशिंग तरल मा परिणत गर्न सकिन्छ, धेरै लागत र उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था
कार धो शम्पू र डिटर्जेंट संग मिश्रण को लागि सफाई को प्रभाव! यातायात लागत मात्र होइन तर यो पनि सुरक्षित छैन ओटो वाशिंग खर्च घटाउनुहोस्.
प्राकृतिक र इकोलोजिकल एन्जाइम प्रयोग गरेर सिट्रस तेल निकाल्न जुन एक बोट हो बायोडिग्रेडेबल बाँकी बिना सबै उद्देश्य क्लीनर, यो कार, इनडोर वातावरण, बाँझीकरण, जीवाणुरोधी र ताजा हावा ल्याउने कार्यको साथ लागू हुन्छ।
1PC विन्डशील्ड वाशर ट्याब्लेट 4L वाइपर फ्लुइडको बराबर! यो द्रुत रूपमा विघटन हुन्छ, उत्पादन गरिएको घरको विन्डशील्ड वाइपर फ्लुइड, विन्डशिल्डमा तेल फिल्म, शेलॅक र रूख ल्याटेक्स हटाउन द्रुत र कुशल। भण्डारण सजिलो तपाईं को लागी ठाउँ बचत गर्न को लागी।
बहु प्रभावशाली स्प्रे क्लीनर
एक जैविक शक्तिशाली एकीकृत सफाई एजेन्ट। यो केवल कपडा दागहरूका लागि उपयुक्त छैन, तर भान्साको उपकरण, काठको फर्श, बाथरूम टाइल, शौचालयमा बलियो डिटेन्टिनेटरले पनि कार्य गर्दछ। निर्माताद्वारा प्रत्यक्ष बिक्री, प्रमाणित वस्तुहरू सुनिश्चित गर्नुहोस्।
OPS गन्ध रिमूभर तुरून्त स्प्रे सबै गन्धबाट छुटकारा पाउनुहोस् कार मूत्र, घरपालुवा जनावर, सिगरेट गन्ध, बान्ता, डायपर, फोहोरबाट। यो लामो समय देखि सबै अवस्थित गन्ध, र गन्ध निर्माण रोक्न freshes हटाउँछ। १००% प्राकृतिक, बायोडिग्रेडेबल मेडिकल ग्रेड उत्पादन, गैर विषैले सूत्र, छालामा सीधा प्रयोग गर्नका लागि सुरक्षित।
Wholesales winfecting wkes bluk। तपाईका हातहरू सफा गर्न र कार्यालय वा कामका सामग्रीहरू राम्रो अवस्थामा राख्नको लागि दुबै वास्तबमा वाइप गर्नुहोस्। % 99% हानिकारक रत्नहरू मारिए र केही हदसम्म हटाइयो। खाने र पिउन अघि प्रयोग गर्न सुरक्षित। कोरोनाभाइरसको रक्षा गर्नुहोस्!
१०० एमएल हात सेनिटाइजर जेल
थोक सेनिटाइजर जेल विभिन्न मोडेल, ML०ML, १००ML, ML००ML, १ L बाट। छालाको स्वास्थ्य र स्वच्छता सुधार गर्न इथानोलको साथ बनेको, यसमा न्युश्चराइजरहरू हुन्छन् र मुसब्बर सारको धनी हुन्छ, हल्का सुगन्धित। कोमल सामग्रीहरू लगातार प्रयोगको लागि सुरक्षित छन्। सफा हात राख्नुहोस् र तपाईंको परिवारको लागि स्वास्थ्य!
हामी ओपीएस छौं। हामी उत्कृष्ट कार सफाई आपूर्ति, घरेलू सफाई उत्पादन गर्छौं।
हाम्रा सबै उत्पादनहरू पर्यावरण-अनुकूल, घट्न योग्य छन्, स्वास्थ्यको लागि कुनै हानिकारक रसायनहरू छैनन्! हामी पनि हाम्रो ग्राहकहरूको लागि उत्पादन अनुकूलन गर्न सक्दछौं।
झेजियांग OPS वातावरणीय संरक्षण टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड एक उच्च तकनीक उद्यम हो जुन पेशेवर अनुसन्धान र विकास, कार वाश उत्पादनहरूको उत्पादन र बिक्री, अटो डिटेलिंग आपूर्ति, विन्डशील्ड वाइपर फ्लुइड, धुवाँ, घरपालुवा गन्ध हटाउने स्प्रे, वातावरणीय धातु विज्ञान उत्पादनहरू, हात सेनिटाइजर जेल, मोटर वाहन स्वास्थ्य र सौन्दर्य रखरखाव उत्पादनहरू।
हामीसँग स्वतन्त्र बौद्धिक सम्पत्ती अधिकार, अनुसन्धान, र विकास प्रयोगशाला र स्वचालित उत्पादन लाइन, कडा वैज्ञानिक अनुसन्धान बल छ। हाम्रो आफ्नै ओपीएस ब्रान्ड वाइप-फ्री कार वाश पाउडर व्यापक रूपमा कार सफा गर्नका लागि लागू हुन्छन् विभिन्न मोटर वाहन सेवा पसलहरु, कार सेवा स्टेशनहरु र सौन्दर्य सेवा पसलहरु बाट। हाम्रो कारखाना vistit मा स्वागत छ र यी उत्पादनहरु बुक!
हाम्रो ग्राहक कस्तो हुन्छ?
मेरो स्वतन्त्र सफाई सेवा पसलमा प्रयोग गरी पिप-फ्रि कार वाश पाउडर पाउनुभयो। यो प्रति प्रति3मिनेट मात्र लाग्छ र वास्तवमा राम्रो काम गर्दछ। म विशेष रूपमा अहिले उत्पादन को प्रयोग गर्दछु। पनि बचाऊ,
श्रम लागत कटौती, यो माया !!
अद्भुत सफाई प्रभाव, biodegradable ओटो विस्तार को आपूर्ति, तपाईं धोने पछि तुरुन्त गाडी, ओपीएस पानी को धब्बा छोड नहीं हुनेछ। काम गर्न सजिलो!
यसले कपडा, कालीन, फर्निचर, भान्साको उपकरण, वानिल इन्जिनको भित्ता र केहि अन्य चीजहरूमा राम्रो बनाइयो। यसले लगभग सबै गहिरो हटाउँछ जुन मैले सक्दिन। अहिलेको लागि उत्तम प्रयास हो जुन मैले प्रयास गरें। यसको कुनै गंध छैन, छालामा जलाइदिँदैन, म यसलाई दस्तुरीको प्रयोग गर्दछु। यो साँच्चै राम्रो र सस्तो उत्पादन हो!
कुनै प्रश्न? हामीलाई लेख्नुहोस्!
नम्बर। 1010,3बिल्डिंग, वांडा Piazza, Taizhou, Zhejiang, चीन।
कृपया साबित गरेर तपाई मानव हुनुहुन्छ फ्ल्याग.